Trump oo mar kale weeraray Ilhaan iyo saaxiibadeed. - NorSom News
Trump oo mar kale weeraray Ilhaan iyo saaxiibadeed.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale weerar dhan afka ah ku qaaday afar hablood oo ka tirsan xubnaha Congress-ka, oo asal ahaan ka soo jeeda dalalka Kale.
Mr Trump ayaa axada maanta ah ku soo qoray bartiisa Twitter-ka in looga baahan yahay haweenkan in ay raali galin ka bixiyaan wixii ay horay u Dhaheen.
Xayeysiin: Shirkada: Sharcigu xaqiisa ma siiyo qofkii aamusa, nala soo xiriir, si aan kiiskaaga u dhageysano: Naga soo wac 45970350 ama riks sawirka kore.
Inkastoo hogaamiye yaasha wadamada caalamka ay maalmihii la soo dhaafay Trump ku dhaleeceynayeen hab dhaqankiisa ay isir soocnimada ka muuqato hadane taasi kama hor istaagin in uu markale weeraro Gabdhahaan.
Wuxuu yiri ma aaminsani in 4 ta hablood ee ka tirsan aqalka Congress-ka in ay jecel yihiin dalka Mareykanka,waa in ay raali galiyaan Mareykanka iyo Israel ayuu yiri Trump. Dhanka kale waxaa uu tilmaamay in dumarkaan ay burburinayaan sumcada xisbiga mucaaradka ee Dimuquraadiga Mareykanka.
Previous articleQaabkan ayay dadka ugu badan NAV lacag aysan xaq u laheyn uga qaataan.
Next articleMaxkamada sare oo ka fariisaneysa kiiskii Sumaya Jirde iyo haweenaydii aflagaadeysay.